खारेजीबाट जोगियो स्मार्ट टेलिकम
दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझायो ३० करोड
स्मार्टले अब ३ महीनाभित्र रू. २ अर्ब २९ करोड बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले अनुरोध गरेअनुसार नै प्राधिकरणले रू. ३० करोड बुझाउन १५ दिन समय उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीले साउन २८ गते मंगलवार अन्तिम दिनमा नै ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमसँगै १५ दिनको समय पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेशन प्रालिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई साउन मसान्तसम्मको ६५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यसबाहेक साउन २८ गतेभित्र म्याद पाएर बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएका अन्य कम्पनीहरू वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले रू. ४ करोड ६२ लाख र आईटेल कम्युनिकेशन प्रालिले रू. ३३ लाख ९९ हजार बक्यौता तोकिएको समयमा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार तोकिएको म्यादभित्र रकम नतिरेको आईटेल कम्युनिकेशन स्वतः खारेजीको चरणमा गएको छ भने वेब सर्फरले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल भने समय दिए पनि बक्यौता नतिर्ने कम्पनी खारेज हुने बताउँछन् ।
यता, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने बाँकी बक्यौता तिर्न भदौ १ गतेसम्मको म्याद पाएको छ । सो अवधिभित्र कम्पनीले कबोल गरेअनुसार ७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रकम तोकिएको ३ महीनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । नेपाल स्याटेलाइटको करीब रू. ८० करोड बक्यौता छ । बक्यौता बुझाउन बाँकी अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकमबारे भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । युटीएलको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर, प्राधिकरणले सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले पनि बाँकी बक्यौता बापतको रकम रू. १ अर्ब ७ करोड प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता नतिरेका कम्पनीहरूलाई असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले रकम तिर्न बाँकी छ ।